विवाहको तयारी भएको घरमा उनैको काजकिरिया ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/विवाहको तयारी भएको घरमा उनैको काजकिरिया !
गुल्मी – गुल्मी घमिर गाउँका लालप्रसाद पन्थी केहि दिन अघिसम्म छोराको विवाह गर्ने तयारीमा जुटिरहेका थिए । ‘यसै बैशाख महिनाको लगनमा माइलो छोरा यमलाल पन्थीको विवाह गर्नका लागि केटी माग्न कुरो समेत चलाइएको थियो ।’ उनै छोराको काजकिरियाको कुनोमा बसेका बाबु पन्थीले भने । दुर्भाग्य नयाँ वर्षको दिन घुम्न हिँडेका बेहुला बन्ने तयारीमा रहेका छोरा यमलाल पन्थी अर्को दिन शव बनेर फर्किए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका खरिदार रहेका उनी त्यसदिन अन्य कर्मचारीसहित प्यूठानको स्र्वगद्वारी दर्शन गर्न गएका थिए।
उनका अनुसार एकैसाथ दुई भाइले शाखा अधिकृतमा नाम निकालेका थिए । तानसेनको क्याम्पसको पढाई सकेर त्रिभुवन विश्व विद्ययाल किर्तिपुरमामा मास्टर डिग्री गरेर सुरुमा नेपाल बैंक लिमिटेडमा जागिर खाएका न्यौपाने सोलुखुम्वु र धादिङ्गका दुई गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । गृह जिल्ला स्याङ्गजाको गल्यालङ्ग नगरपालिकामा पनि केहि समय काम गरेका थिए । निजामति सेवामा प्रवेश गरेको ५ वर्ष जति भएको थियो । स्र्वद्वारी दुर्घटनाले कलिला मुनाहरु र भविष्यका कर्णधारहरु चुँडेर लगेको भन्दै जिल्लावासी शोकाकुल बनेका छन्। (प्रेम सुनार/ग्लोबल आवाज)